एउटा यस्तो प्रेम–यात्रा
प्रेम के हो, आत्मीयता कसरी हुन्छ, माया\_प्रेमको अभिव्यक्तिको माध्यम के ? आदि प्रश्नको उत्तरलाई चित्रकला मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्, ईशान परियार र सविता डंगोलकाे जोडीले ।
ओस्कारमा उत्कृष्ट बन्यो पहिलो विदेशी भाषाको सिनेमा 'पारासाइट'
यो वर्षको उत्कृष्ट ओस्कार अवार्ड दक्षिण कोरियाली चलचित्र 'पारासाइट'ले जितेर नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ ।
'चमार समुदायको पहिचान र अवस्था' विमोचित
सिनो वहिष्कार आन्दोलनको दुई दशक पुगेको अवसर पारेर समता फाउण्डेशनले चमार समुदायको पहिचान र अवस्था सम्बन्धी पुस्तक विमोचन गरेको छ ।
विराजको ‘साङ्लो’ हाउसफुल अभिनेता विराज भट्टको निर्माण तथा डेब्यू निर्देशन रहेको चलचित्र ‘साङ्लो’ को प्रतिक्रियाले विराज दंग छन् ।
नेपालकै जेठो संस्मरण पुस्तक– भक्तपुरमा गोर्खाली हमलाः गरुडनारायण गोंगलको सम्झना, ग्रन्थकार– देविचन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाशक– जगदम्बा प्रकाशन, पृष्ठ ९०+२, मूल्य– रु.२५०
बाघ बुझ्न, बुझाउन बरालको पाटेबाघ नेपाली भाषामा बाघबारे लेखिएको दुर्लभ पुस्तक मात्र होइन, बाघबारे बुझाउन, संवेदनशील हुन लेखिएको सरल पुस्तक पनि हो । पुस्तकबाट संरक्षणकर्मीभन्दा बढी सामान्य नागरिक र बाघसँग जीवन जोडिएका स्थानीयवासीले फाइदा लिनसक्छन् ।
अधूरै रह्यो नेपालीको ग्रामी सपना नेपाली बाँसुरीवादक मनोसे नेवा (मनोज सिंह) ६२ औं ग्रामी अवार्डमा पहिलोपटक नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए । उनीसहित देव प्रिमल र मिटन समुहको अल्बम ‘देव’ ग्रामीमा ‘बेष्ट न्यू एज अल्बम’ विधामा मनोनित भएको थियो ।
‘डियर कमरेड’ ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा (भिडियाेसहित) युट्युबको नम्बर १ ट्रेन्डिङमा ‘डीयर कमरेड’ नामक चलचित्र छ । तेलुग, मलायालम र कन्नडा भाषामा बनेको यो चलचित्रलाई हिन्दी भाषामा डब गरेर युटुब रिलिज गरिएको हो ।
‘वनफूल’ र ‘धन्यवाद’ लाई ‘ह्याट्रिक’ हिरो २३औं हिट्स एफ.एम. म्युजिक अवार्डमा सविन राई एन्ड द फ्यारोहको ‘धन्यवाद’ गीत र दुर्गा परियारको ‘वनफूल’ले तीन तीन विधामा अवार्ड हात पार्न सफल भएको छ ।
‘नेपाली भाषाको संरक्षणका लागि विश्व सम्मेलन आवश्यक’ नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणका लागि विश्वमा भएका नेपालीबीच ‘विश्व सम्मेलन’ गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव १ फागुनदेखि तेस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आगामी १ फागुनदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
दुर्घटनामा गायक निशान भट्टराईको निधन
गायक पवनको ‘बधाई छ’ सार्वजनिक गायक पवन गिरीको ‘बधाई छ’ गीतको म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ ।
चलचित्र ‘इन्काउन्टर’को ‘बारुली बारुली’ सार्वजनिक नेपाली कथानक चलचित्र ‘इन्काउन्टर’को गीत ‘बारुली बारुली’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पुरस्कार–२०७६ मैनालीलाई
नित्यराज प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो वर्षको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पुरस्कार लेखक गोपीनाथ मैनालीलाई प्रदान गरेको छ ।
जाेकरकाे बन्दुकः कवितामा व्यङ्ग्य र संवेदना
चन्द्रकला राईको ‘ठूले’ सार्वजनिक ( भिडियाे सहित) गायिका चन्द्रकला राईको ‘ठूले’ बोलको म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ । युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको गीतको संगीत पारस मुकारुङले दिएका छन् ।
भारतीय गायिका आशा भोस्लेद्वारा राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट भारतीय चर्चित गायिका आशा भोस्लेले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेकी छन् । भोस्लेले राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा पुगी राष्ट्रपतिसँग भेट गरेकी हुन् ।
चिनियाँ चलचित्र महोत्सव शुरु नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासको आयोजना र वर्ल्ड कल्चरल नेटको संयोजनमा आजदेखि राजधानी काठमाडाैंमा चिनियाँ चलचित्र महोत्सव शुरु भएको छ ।
अभिभावक शिक्षा केन्द्रित ‘रोपेगुना फल’ र ‘चोन्चा के खोन्ता’ प्रशारण शुरू युनिसेफ नेपालको सहयोगमा एन्टेना फाउन्डेसन नेपालले सोमबारदेखि रेडियो नाटक श्रृंखला ‘रोपेगुना फल (नेपाली) र ‘चोंचा के खोंता’ (मैथिली र भोजपुरी) प्रशारण आरम्भ गर्ने भएको छ ।
बक्स अफिसमा चुलबुल पांडेको धमाका, पहिलो दिनमै दबंग–३ को ३० करोडको कमाइ अभिनेता सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, डिंपल कपाडिया, सई मांजरेकर, अरबाजखान, सुदीप किच्चालगायतको अहम भूमिका रहेको बलिउड फिल्म दबंग–३ को धमाकेदार प्रवेश भएको छ ।
मानवताका प्रेरक पुस्तक सन्दुक रुइत (जीवनी) लेखक अली ग्रिपर अनुवाद खगेन्द्र संग्रौला प्रकाशक फाइनप्रिन्ट बुक्स पृष्ठ २३५, मूल्य रु.५५०
अमिताभ बाग्चीलाई डिएससी दक्षिण एशियाली साहित्य पुरस्कार अमिताभ बाग्चीको उपन्यास ‘हाफ द नाइट इज गन’लाई डिएससी दक्षिण एशियाली साहित्य पुरस्कार प्रदान गर्दै आठौं आईएमई नेपाल साहित्य महोत्सवको आठौं संस्करण सकिएको छ ।
कलाकार क्षेत्री मृत अवस्थामा भेटिए कलाकार दीपक क्षेत्रीको निधन भएको छ । काठमाडौँको कालिकास्थानस्थित घरमा सुतिरहेको अवस्थामा क्षेत्री मृत अवस्थामा फेला परेको चलचित्र विकास बोर्ड नेपालका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताए ।
भो राष्ट्रपति बन्नु छैनः डा. सन्दुक रुइत पोखरामा शुक्रबारदेखि आइएमई नेपाल साहित्य महोत्सवको आठौं संस्करण शुरु भएको छ ।
कार्टुन क्रु छोडेपछि बनाएको भिडियो ट्रेन्डिङमा चर्चित डान्स ग्रुप ‘कार्टुन क्रु’ अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । क्रु छोड्नुको कारण आश्मा र सरोज भएको बताउँदै बनाएको भिडियो अहिले दुई नम्बर ट्रेन्डिङमा छ ।
मेलिना र गगन पुनको पञ्चेबाजा गायक गगन पुनको बेनी बजार बोलको पञ्चेबाजा गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।